China Smart Socket Outlet ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Zhechi Electric
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စမတ်အိမ် > Smart Socket ထွက်ပေါက်
Wi-Fi စမတ် နံရံကပ်ပလပ်ပေါက်သည် WiFi ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများ၏ ပါဝါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ကွန်ရက်ရရှိနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင် နံရံကပ်ပေါက်၏အခြေအနေကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ ကိရိယာတစ်ခုက ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ WiFi wall socket controller တစ်ခုထက်ပိုသည်။ Smart Link net နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် WiFi wall socket တွင် ဆက်တင်များကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင်၊ ၎င်းတွင် သင်နှစ်သက်သော DIY နှင့် သင့်စွမ်းအင်ခြေရာခံခြင်းအတွက် ပါဝါညွှန်ပြချက်အတွက် အချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သင့်အိမ်တွင်းရှိ သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းကိရိယာများကို ပျော်ရွှင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါစေ၊ ၎င်းနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။ .
Timer Function ပါရှိသော Smart socket ပလပ်ပေါက်၊ သင့်အိမ်နှင့် ရုံးမီးများကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ App ၏ timer လုပ်ဆောင်ချက်သည်7ရက်စာ အချိန်ဇယားများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး မီးဖွင့်/ပန်ကာ အလိုအလျောက် ပိတ်ရန် အချိန်အတိအကျကို စီစဉ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သင့်အား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ 1min/5min/30min/1hour စသည်တို့၏ ရွေးချယ်မှု။ နှစ်သစ်အတွက် ရွေးချယ်မှုများ။
Moes စမတ် wall socket တွင် မတူညီသော မိသားစုဝင်များက မျှဝေထားသော ထိန်းချုပ်ဆိုဒ်များစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးသည် စမတ်ပလပ်ပေါက်များစွာကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Smart socket ပလပ်ပေါက် IFTTT ဖြင့် နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များ ပေါင်းထည့်ပါ- အကယ်၍ ၎င်းသည် အခမဲ့ web-based ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်မီးခလုတ်၊ မီးအိမ်ဖွင့်ရန်၊ ပန်ကာများ သို့မဟုတ် သင်ထွက်ခွာသည့်အခါ အိမ်မပြန်မီ အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ပါးလွှာမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ .
Universal USB Wall Switches Sockets
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခလုတ်များ၊ Universal USB Wall Switches Sockets၊ မီးအိမ်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ လမ်းဆုံသေတ္တာများ၊ Dry lining boxes၊ Plugs၊ Metal Clad နှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို UK၊ Ireland ကဲ့သို့ နိုင်ငံများစွာသို့ ရောင်းချနေသော အခြားလျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ယီမင်၊ စင်ကာပူ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ တောင်အာဖရိက၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ ဘော့ဆွာနာ စသည်ဖြင့်။
Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Glass Panel Touch Wall Light Switch Socket Outlet ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
Home Smart Wall Outlet Socket
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Home Smart Wall Outlet Socket ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
USB ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Socket
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော USB Wireless Tuya Smart Socket ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Wifi Smart wall socket ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
အက်ပ် Wifi UK BS Smart Sockets
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော App Wifi UK BS Smart Sockets ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးကို Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
Zhechi Electric သည် Smart Socket ထွက်ပေါက် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အထူးပြုထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ Smart Socket ထွက်ပေါက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် R&D နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် အမြဲအာရုံစိုက်ထားပြီး လက်တွေ့အကျဆုံး Smart Socket ထွက်ပေါက် ကို ဖန်တီးရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ဤတွင် သင်သည် နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှုနှင့် လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကိုးကားချက်များနှင့် နမူနာများကို အခမဲ့ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ချိုသာသောစျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်း2နှစ် အာမခံ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ In stock လာဝယ်ကြနော်။